के आँचलले अझै सुन्दरी बन्न नाकको सर्जरी गरेकी हुन् ? खोलिन बास्तबिकता (भिडियो) - Thulo khabar
के आँचलले अझै सुन्दरी बन्न नाकको सर्जरी गरेकी हुन् ? खोलिन बास्तबिकता (भिडियो)
आँचल शर्मा पछिल्लो समयकी निकै चर्चित नायिका तथा मोडेल हुन् ।
उनले धेरै म्युजिक भिडियो र फिल्महरुमा अभिनय गरिसकेकी छिन् । र उनले अभिनय गरेको चलचित्र तथा म्युजिक भिडियोले राम्रै चर्चा कमाएका पनि छन् ।
नाई नभन्नु ल ४ बाट अभिनय यात्रा आरम्भ गरेकी आचल सुन्दर अनुहार, मिलेको जिउडालले गर्दा निकै आकर्षक देखिन्छिन । तर आचल शर्माको नाक हल्का लामो जस्तो देखिन्छ । र यहि बिषयलाई लियर उनले अझै सुन्दर देखिन नाकको सर्जरी गरेको भनेर धेरैले चासो पनि देखाएका छन् ।
नेपाली चलचित्र उद्योगमा प्रवेश गर्नु अगावै उनी एक सौन्दर्य प्रतियोगिता जितेकी थिइन् । के आँचलले सुन्दरताकै लागि नाकको सर्जरी गरेकी हुन् त ? नायिका आचल शर्माले नाकको सर्जरी गरेको भनेर टिकटकको कमेन्ट सेक्सनमा धेरैले कमेन्ट गरेका छन् ।
एक अन्तरबार्ताको क्रममा आँचलले आफुले नाकको सर्जरी गरेको हल्ला सहि भएको बताएकी छिन् । ‘नाकको सर्जरी गराएको हल्ला सत्य हो’ भनेर सोधिएको प्रश्नको उत्तर दिदै उनले भनिन् ‘सत्य हो’ ।
बास्तबिकता के हो त ? सुन्दरताको लागि सर्जरी गरेको नभई नाकमा समस्या भएको कारण सर्जरी गरेको उनको भनाई छ । उनी भन्छिन् ‘मेरो नाकको साईडमा मासु पलाको थियो, सास फेर्न अलिकती गार्हो होकि जस्तो भयो मलाई, चेकअप गर्ने क्रममा अहिले फाल्न पर्छ, यो त बढ्दै जाने कुरा हो भनेपछी फाल्देको’ ।
मैले प्लाष्टिक सर्जरी गराएको होईन, प्लाष्टिक सर्जरी भनेको त नाक नै बनाउने होनित, मात्रै बढेको मासु काटेको हो । प्लास्टिक सर्जरी गरेको भएत चिरिएको मिलाएको दाग देखिन्थ्यो नि त ।
पछिल्लो समय आँचल शर्मा टिकटकबाट टाढा छिन् । एक भिडियोमा उनले सुगालाई परेवा भनेपछी फ्यानहरुको निकै आलोचना खेप्नुपरेको थियो । कतिले निकै नराम्रो कमेन्ट गरेका थिए । त्यसैले उनले टिकटकको कमेन्ट सेक्सननै अफ गरेकी थिईन ।